Mila fahamailoana mandrakariva… | NewsMada
Mila fahamailoana mandrakariva…
Ahoana amin’izay izao? Malalaka ny lalana amin’ny fiatrehana ny fiainana andavanandro, indrindra ny fitadiavana. Afa-tsy amin’ireo distrika vitsivitsy mbola iharan’ny fepetra amin’ny fihibohana noho ny fahamehana ara-pahasalamana. Tonga izay nandrasana sy niaretana izay ela izay?
Na izany aza, mbola mila fitandremana tanteraka ny fiarovantena sy ny fiarovana ny hafa amin’izay ady amin’ny fihanaky valanaretina Covid-19 izay. Tsy hita maso ny tsimokaretina, na azo tilina aza. Amin’izao ririnina izao, matanjaka ho azy izany, ela velona, haingana sy mora mitombo isa…
Satria tsy mbola resy tanteraka ny fahavalo, voatery miara-miaina aminy isan’andro ny tena toy ny aretina hafa rehetra mety hitranga amin’ny fotoany. Aza voany ihany? Tsy misy afa-tsy ny fanarahana amin’ny antsipiriany sy manontolo ireo fepetra fisorohana no azo antoka sy mahomby indrindra.
Mba tsy ho variana amin’ny fitadiavana àry ka tsy mahita iza eo ambany maso. Heverina ho mbola eny ho eny hatrany ny tsimokaretina, indrindra amin’ireo distrika mbola miady mafy amin’izany. Mety hahavoa ny tena na ny hafa izany ka mila fahamailoana mandrakariva. Ny fitadiavana, efa ho lava.
Sao fitadiavana àry no atao ka aretina no hita, sanatria? Ny tsy fitandremana kely foana ataon’ny olona iray na vitsivitsy no mety hitera-doza lehibe ho an’ny maro. Toy ny efa niparitahan’io tsimokaretina io hatrany am-boalohany… tonga amin’izao dingana izao: misy maty, mitombo isa ny voa…
Tsy lavina, azo lazaina fa voafehy ny aretina mitaha amin’ireo firenen-dehibe; eny, na toy inona filazan’ny sasany. Tsy vitan’izay, mahomby ny fitsaboana ary misy ny fanafody fanefitra sy fanafana. Izay ny mahatonga izao fisokafana amin’ny fihibohana izao, afa-tsy distrika vitsivitsy sisa.
Na izany aza, mila fandraisana andraikitra matotra amin’ny maha olom-pirenena ny fahafahana. Tsy fanaovana izay tian-katao na izay danin’ny kibo, sanatria. Tsy miova ny tsimokaretina fa ny olona sy ny fomba fiadiny amin’izany izao no miova. Mila fahamailoana mandrakariva?